Tamarta mowjadu waxay ka timaadaa dhaqdhaqaaqa hirarka | Cusbooneysiinta Cagaaran
Nuria | | Tamarta Wave
Mawjadaha badda kaliya wax uma taraan badmaaxyada laakiin waxaan ka wada faa'iideysan karnaa tamarta ay soo rogmadoodu soo saarto si ay u soo saarto koronto iyada oo tiknoolajiyad sax ah loogu talagalay. Tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee aan wasakhda ahayn waxaa loo yaqaannaa mowjad ama awood hirar illaa iyo hadda waxaa jira mashaariic yar oo adduunka ka jirta maadaama tikniyoolajiyadiisu qaali tahay oo dhib badan tahay.
Isbaanishka, tamarta mowjadaha weli ganacsi ahaan ugama faa'iideysan, waxaa jira kaliya laba saldhig oo tijaabo ah oo ku yaal Bulshada Cantabria iyo Basque Country, midna wuxuu ku jiraa dhuumaha Granadilla, Tenerife.
Tamarta ay soo saaraan hirarka waxaa ka faa'iideysanaya buoys kaas oo hoos iyo hoos ugu dhaca bistoolad, kaas oo lagu rakibay matoor hawo ku shaqeeya. Biyuhu way baxaan oo waxay galaan mashiinka oo dhaqdhaqaaqa ayaa wata matoor soo saara koronto kaasoo loo dirayo dhulka iyadoo la raacayo fiilada gujiska.
Shirkadda Iberdrola geedka hawl geli, gudaha CantabriaIllaa iyo hadda, waxay rakibtay 10 buo oo dhererkeedu yahay 40 mitir oo u dhexeeya 1,5 ilaa 3 kiiloomitir xeebta, warshaddu waxay ku fadhidaa aag dhan 2 kiiloomitir oo laba jibbaaran.
Buoysku waxay leeyihiin awood 1,5 MW, kor iyo hoos ayey u koraan kolba markay bareeyaan oo furayaan fiilo dhaqaajisa matoor.
Iberdrola waxay xaqiijineysaa in mid ka mid ah faa'iidooyinkeeda ay tahay nabadgelyadeeda maxaa yeelay way quusatay, mid kalena wuxuu noqon lahaa adkeysi badan sida ay sheegtay shirkadda, saameynta deegaanku waa mid aad u yar.
Dhinaceeda, Motrico, Dalka Basque, warshad tijaabo ah ayaa hada laga dhisayaa halkaas oo buoy leh teknolojiyad la yiraahdo tiirka biyaha qulqulaya. Markay biyuhu galaan tiirka, waxay ku qasbeysaa hawada safka inay maraan marawaxadaha oo ay kordhiyaan cadaadiska ku jira tiirka. Markay biyuhu soo baxaan, hawadu waxay dib ugu laabaneysaa marawaxadaha maxaa yeelay dhinaca bada ee marawaxada ayaa leh cadaadis yar. Marawaxada ayaa isku rogan isla jahada waxayna keentaa in koronto dhaliyaha uu soo saaro koronto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta Wave » Tamarta mowjadu waxay ka timaaddaa dhaqdhaqaaqa hirarka